ဩစတြေးလျသွား လေယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်တယောက်၏ အသက်ကို ကယ်ခဲ့သည့် ပဲခူးသား သမားတော်ဆရာဝန်ကြီး - Real Gaming Myanmar
ဩစတြေးလျသွား လေယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်တယောက်၏ အသက်ကို ကယ်ခဲ့သည့် ပဲခူးသား သမားတော်ဆရာဝန်ကြီး
By zc /5months ago / Health / No Comments
ဩစတြေးလျသွား လေယာဉ်ပေါ်တွင် ခရီးသည်တယောက်၏ အသက်ကို ကယ်ခဲ့သည့် ပဲခူးသား ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ် သမားတော်ကြီး Drတိုးလွင်
အမြင့်ပေ ၂၀၀၀၀ – ၃၀၀၀၀ အထက် ပျံသန်းသော လေယာဉ်များပေါ်တွင် အောက်ဆီဂျင် ဓါတ်မှာ လျော့နည်းမြဲဖြစ်သည်။ သွေးထဲရှိ အောက်ဆီဂျင် Oxygen saturation ကိုတိုင်းကြည့်ပါက ပုံမှန် ၉၈ ရှိသူသည် ၉၆ ၉၅၊ ပုံမှန် ၉၇ ရှိသူသည် ၉၅ ၉၄ သို့ ကျနေသည်ကို တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
လေကြောင်းလိုင်း၏ အရည်အသွေးအပေါ် ၊ ခရီးသည် အနည်းအများအပေါ် ၊ ရိုးရိုးတန်းနှင့် Business class( လူနည်း အခန်းကျယ်) အပေါ် စသော အချက်များပေါ်လည်း မူတည်သည်။
ထို့ကြောင့် အဆုပ်မကောင်းသူ ရင်ကြပ်ပန်းနာရှိသူ အတိုင်းအတာတခုထိ အရေးကြီးသော နှလုံးရောဂါ ရှိသူတို့သည် ဒီအချက်ကို သိရန် လိုအပ် ပေသည် ။
ယခုခေတ်တွင် လက်ညှိုးတွင် အလွယ်တကူ တပ်၍ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် ပါဝင်နှုံး တိုင်းနိုင်သော Oxymeter လေး ဆောင်ထားနိင်လျင်တော့ အလွန်ကောင်းပါသည် ။ သို့မပာုတ်လျင် လေယဉ်ပေါ်တွင် အသက်ရှူရွှ်ျ မကောင်းပါက လေယာဉ် ပေါ်တွင် တောင်းယူ၍ တိုင်းနိုင် ပါသည် ။
လိုအပ်လျင် အောက်ဆီဂျင် တောင်းရှူပါ ။ သူတို့မှာ portable oxygen cylinders များ ပါပါသည် ။ ပြည်တွင်း လေကြောင်း လေယာဉ်များတွင် oxygen cylinders များ အောက်ဆီဂျင်ပြည့်မပြည့် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း တာဝန်ရှိ သူများအား သတိပေး အကြံပြုအပ် ပါသည် ။ (အတွေ့ အကြုံအရ မေတ္တာနှင့် ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည် )
ယနေ့ ၂၂ / ၁၂ / ၁၈ မြန်မာစံတော်ချိန် နံက် ၄ နာရီ ( ဆစ်ဒနီစံတော်ချိန် နံက် ၈ နာရီခွဲ ) အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါမည် ။ စင်္ကာပူမှ ၂၂ ရက်နေ့ စင်္ကာပူ စံတော်ချိန် ၀၀:၄၅ နာရီ ထွက်လာသော လေယာဉ်ပေါ်တွင် ပါလာသော နိုင်ငံခြား ဆေးကျောင်းသူလေး တယောက်သည် ဆစ်ဒနီမြို့ လေဆိပ်ရောက်ရန် ၃နာရီ ၃၀မိနစ်ခန့် အလိုတွင် နှလုံးတုန်ခါမှု ပြင်းထန်ခြင်း အသက်မရှူနိင်ခြင်းဖြစ်ကာ ဝေဒနာပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရသည်။
Chief crew မှ PA system မှ အကူအညီတောင်းသဖြင့် သွားရောက် ကြည့်ပေးရသည်၊ ယခင်က သူမသည် ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါရှိသည် Paroxysmal Atrial Fibrillation ခေါ် နှလုံး ပုံမမှန် အမြန်ခုန်ခြင်းလည်းရှိသည်၊ စတီးရွိုက် steroids ဆေးများလည်း သောက်နေရလေ့ရှိသည် ။ အမေဖြစ်သူကသူမမှာ Sensitive မတည့်သော အစာများလည်း ရှိသည်ဆိုသည် ။
ယနေ့လည်း လေယာဉ် စတက်ပြီး ၂နာရီခန့်အကြာတွင် စ၍ ကြပ်သည်ဆိုသည် ၊၊ သူမက ဆေးကျောင်းသူဖြစ်သည့် အလျောက် ဖြစ်ကာစတွင် သူ့ဖါသာကုသည် ။ Ventolin2puffs မသက်သာတော့3puffs ထို့နောက်4puffs ။
နောက် အဆုပ်ထဲက အသံများ ပျောက်သွားသည် ။ ပြီးတော့ ရင်ထဲ နေ၍ မရတော့ လည်ပင်းတွင် အရမ်းတုန်ခါနေသည်ဟု ပြောသည် ။
တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားလျက် ရှိသည် ။ လက်ဖျားများ အေးလျက်ရှိသည် ၊ သို့သော် အရောင်ကောင်းသည် ။
လေယာဉ် အရေးပေါ် ပစ္စည်းများထဲမှ နားကြပ်နှင့် oxymeter ရသည် ၊ Oxygen ရှူနေပြီးဖြစ်သဖြင့် saturation ကောင်း၏ ၊ အဆုပ်ကလည်း အတိုင်းအတာ တခုထိ ရှင်း၏ ၊ နှလုံးခုန်နှုးံက ၁၂၆- ၁၃၀ ကြားရှိ၏။
ကြည့်နေရင်းနှင့် ၁၃၆ ဖြစ်လာ၏ Emergency kit တွင် ဆေးများပြား စုံလင်စွာ မပါသော်လည်း ကံကောင်းချင်တော့ Lanoxin tablet ပါလာ၏။ Metoprolol, Cordarone စသည်တို့ မရှိ။
ထို့ကြောင့် Lanoxin 0.5mg oral တိုက်လိုက်၏၊ ၁၄၀ ကျော်ဆိုလျင်တော့ Injection ပေးရန် ရည်ရွယ်သေး၏၊ Chief crew က ဆစ်ဒနီလေဆိပ်သို့ ရောက်ရန် ၂နာရီခွဲလိုသေးကြောင်း ပြောပါသည် ။
လမ်းမှာ ဆင်းရမလားဟု သွယ်ဝိုက်မေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Lanoxin ဝင်ပြီးလျင် အာနိသင် တိုးတက် ကောင်းမွန်မည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် စောင့်ကြည့်မည်ဟု ပြောပြီး အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေပါသည် ။ လိုလျင် strategy ပြောင်းမည်ပဟုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထား၏။
ဆေး absorption နှင့် action မရခင် ၁၅၀ တချက်ကျော်သွား ၁၆၀ ရောက်ပြီးနောက် ဆေးအာနိသင်ရသောအခါ ( မိနစ်၃၀ ခန့်တွင်) ၁၃၀ သို့ ကျ၏ ၊ ထို့နောက် ၁၂၀ – ၁၁၀ ဆက်ကျ၏။ အခြေအနေ ကောင်းမွန်လာကာ ဆစ်ဒနီလေဆိပ်သို့ ရောက်သောအခါ ၁၀၂ ဖြစ်၏။ ( ဒီ knowledge ရစေသော မြင်ဆရာများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ) ။
ကလေးမလေးလည်း ပြုံးနိုင်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်၏။ Thank you ဟုလည်း ကြိုးစား၍ ၂ခါပြော၏ ။
လေဆိပ်ရောက်သောအခါ ခရီးသည်များ ဆင်းခွင့်မရသေးဘဲ လေဆိပ်မှ Quarantine Medical Team က တက်လာသည် ။ Chief crew က မိတ်ဆက်ပေးသည် ။
သူတို့က လူနာအား ဖျားသေးလား အစရှိသည်ဖြင့် Infection clues တွေ မေးသည်၊ “It’s related to Asthma, Ventolin and heart issue. Not related to infection at all“လို့ ပြောပေးသည်။ သူတို့ လူနာကိုပင် မစမ်းတော့ဘဲ Thank you ပြောကာ ပြန်သွားကြသည် ။
မောနေသော ဆေးကျောင်းသူ လူနာမလေး စိတ်သက်သာ ရာ ရသွားသည် ။ သူမအား လေကြောင်းလိုင်း အစီအစဉ်ဖြင့် ဆေးရုံတွင် ၂၄ နာရီထားရန်နှင့် Observation and further treatment အတွက် လိုအပ်သော information များ ရေးပေးခဲ့ပါသည် ။
Chief Crew မှ မိမိ၏ Visiting Card တောင်းသည် ။ ကျေးဇူးများစွာ တင်ကြောင်း ပြောကြသည်။ Present နှင့် Krisflyer Prestige များ ပေးသည် ။
တိုက်ဆိုင်သည်လား မသိ ။ ကျွန်တော်သည် ညစဉ် အာစိဏ္ဏကံ မြောက်အောင် လုပ်လေ့ရှိသော တရားမှတ်ခြင်း မေတ္တာသုတ်နှင့် ဗောဇ္ဈဉ် သုတ်ရွတ်ခြင်းတို့ကို Changi လေဆိပ် boarding မလုပ်ခင် အချိန်ပိုတွင် ရွတ်ခဲ့ပြီး လေယာဉ်စတက်ချိန်တွင် ပဌာန်းနိဒ္ဒေသ ကိုလည်း ရွတ်သည် ။
ပြီးမှ အစာစားပြီး အိပ်ပျော်သွားသည် ။ နိုးလာသော် လူနာကြည့်ရသည်။ အသက်တချောင်း ကယ်ဖြစ်သွားသည်ဟု လည်း ပြော၍ရမည် ထင်ပါသည် ။
လောကကြီးသည် ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပေစွ ။ လေယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားစဉ် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေ
ဩစတွေးလသြှား လယောဉျပျေါတှငျ ခရီးသညျတယောကျ၏ အသကျကို ကယျခဲ့သညျ့ ပဲခူးသား သမားတျောဆရာဝနျကွီး
ဩစတွေးလသြှား လယောဉျပျေါတှငျ ခရီးသညျတယောကျ၏ အသကျကို ကယျခဲ့သညျ့ ပဲခူးသား ဆီးနှငျ့ကြောကျကပျ သမားတျောကွီး Drတိုးလှငျ
လယောဉျပျေါမှ “ကနျြးမာရေးအန်တရာယျ” သတိပွုရနျ
အမွငျ့ပေ ၂၀၀၀၀ – ၃၀၀၀၀ အထကျ ပြံသနျးသော လယောဉျမြားပျေါတှငျ အောကျဆီဂငျြ ဓါတျမှာ လြော့နညျးမွဲဖွဈသညျ။ သှေးထဲရှိ အောကျဆီဂငျြ Oxygen saturation ကိုတိုငျးကွညျ့ပါက ပုံမှနျ ၉၈ ရှိသူသညျ ၉၆ ၉၅၊ ပုံမှနျ ၉၇ ရှိသူသညျ ၉၅ ၉၄ သို့ ကနြသေညျကို တှရေ့လရှေိ့သညျ။
လကွေောငျးလိုငျး၏ အရညျအသှေးအပျေါ ၊ ခရီးသညျ အနညျးအမြားအပျေါ ၊ ရိုးရိုးတနျးနှငျ့ Business class( လူနညျး အခနျးကယျြ) အပျေါ စသော အခကျြမြားပျေါလညျး မူတညျသညျ။
ထို့ကွောငျ့ အဆုပျမကောငျးသူ ရငျကွပျပနျးနာရှိသူ အတိုငျးအတာတခုထိ အရေးကွီးသော နှလုံးရောဂါ ရှိသူတို့သညျ ဒီအခကျြကို သိရနျ လိုအပျ ပသေညျ ။
ယခုခတျေတှငျ လကျညှိုးတှငျ အလှယျတကူ တပျ၍ သှေးတှငျး အောကျဆီဂငျြ ပါဝငျနှုံး တိုငျးနိုငျသော Oxymeter လေး ဆောငျထားနိငျလငျြတော့ အလှနျကောငျးပါသညျ ။ သို့မပာုတျလငျြ လယေဉျပျေါတှငျ အသကျရှူရျြှ မကောငျးပါက လယောဉျ ပျေါတှငျ တောငျးယူ၍ တိုငျးနိုငျ ပါသညျ ။
လိုအပျလငျြ အောကျဆီဂငျြ တောငျးရှူပါ ။ သူတို့မှာ portable oxygen cylinders မြား ပါပါသညျ ။ ပွညျတှငျး လကွေောငျး လယောဉျမြားတှငျ oxygen cylinders မြား အောကျဆီဂငျြပွညျ့မပွညျ့ စဈဆေးရနျ လိုအပျပါကွောငျး တာဝနျရှိ သူမြားအား သတိပေး အကွံပွုအပျ ပါသညျ ။ (အတှေ့ အကွုံအရ မတ်ေတာနှငျ့ ပွောခွငျး ဖွဈပါသညျ )
ယနေ့ ၂၂ / ၁၂ / ၁၈ မွနျမာစံတျောခြိနျ နံကျ ၄ နာရီ ( ဆဈဒနီစံတျောခြိနျ နံကျ ၈ နာရီခှဲ ) အတှအေ့ကွုံကို ပွောပွပါမညျ ။ စင်ျကာပူမှ ၂၂ ရကျနေ့ စင်ျကာပူ စံတျောခြိနျ ၀၀:၄၅ နာရီ ထှကျလာသော လယောဉျပျေါတှငျ ပါလာသော နိုငျငံခွား ဆေးကြောငျးသူလေး တယောကျသညျ ဆဈဒနီမွို့ လဆေိပျရောကျရနျ ၃နာရီ ၃၀မိနဈခနျ့ အလိုတှငျ နှလုံးတုနျခါမှု ပွငျးထနျခွငျး အသကျမရှူနိငျခွငျးဖွဈကာ ဝဒေနာပွငျးထနျစှာ ခံစားနရေသညျ။
Chief crew မှ PA system မှ အကူအညီတောငျးသဖွငျ့ သှားရောကျ ကွညျ့ပေးရသညျ၊ ယခငျက သူမသညျ ပနျးနာရငျကွပျ ရောဂါရှိသညျ Paroxysmal Atrial Fibrillation ချေါ နှလုံး ပုံမမှနျ အမွနျခုနျခွငျးလညျးရှိသညျ၊ စတီးရှိုကျ steroids ဆေးမြားလညျး သောကျနရေလရှေိ့သညျ ။ အမဖွေဈသူကသူမမှာ Sensitive မတညျ့သော အစာမြားလညျး ရှိသညျဆိုသညျ ။
ယနလေ့ညျး လယောဉျ စတကျပွီး ၂နာရီခနျ့အကွာတှငျ စ၍ ကွပျသညျဆိုသညျ ၊၊ သူမက ဆေးကြောငျးသူဖွဈသညျ့ အလြောကျ ဖွဈကာစတှငျ သူ့ဖါသာကုသညျ ။ Ventolin2puffs မသကျသာတော့3puffs ထို့နောကျ4puffs ။
နောကျ အဆုပျထဲက အသံမြား ပြောကျသှားသညျ ။ ပွီးတော့ ရငျထဲ နေ၍ မရတော့ လညျပငျးတှငျ အရမျးတုနျခါနသေညျဟု ပွောသညျ ။
တုနျလှုပျ ခွောကျခွားလကျြ ရှိသညျ ။ လကျဖြားမြား အေးလကျြရှိသညျ ၊ သို့သျော အရောငျကောငျးသညျ ။
လယောဉျ အရေးပျေါ ပစ်စညျးမြားထဲမှ နားကွပျနှငျ့ oxymeter ရသညျ ၊ Oxygen ရှူနပွေီးဖွဈသဖွငျ့ saturation ကောငျး၏ ၊ အဆုပျကလညျး အတိုငျးအတာ တခုထိ ရှငျး၏ ၊ နှလုံးခုနျနှုးံက ၁၂၆- ၁၃၀ ကွားရှိ၏။
ကွညျ့နရေငျးနှငျ့ ၁၃၆ ဖွဈလာ၏ Emergency kit တှငျ ဆေးမြားပွား စုံလငျစှာ မပါသျောလညျး ကံကောငျးခငျြတော့ Lanoxin tablet ပါလာ၏။ Metoprolol, Cordarone စသညျတို့ မရှိ။
ထို့ကွောငျ့ Lanoxin 0.5mg oral တိုကျလိုကျ၏၊ ၁၄၀ ကြျောဆိုလငျြတော့ Injection ပေးရနျ ရညျရှယျသေး၏၊ Chief crew က ဆဈဒနီလဆေိပျသို့ ရောကျရနျ ၂နာရီခှဲလိုသေးကွောငျး ပွောပါသညျ ။
လမျးမှာ ဆငျးရမလားဟု သှယျဝိုကျမေးတာလညျး ဖွဈနိုငျပါသညျ။ Lanoxin ဝငျပွီးလငျြ အာနိသငျ တိုးတကျ ကောငျးမှနျမညျဟု ယုံကွညျသဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့မညျဟု ပွောပွီး အနီးကပျ စောငျ့ကွညျ့နပေါသညျ ။ လိုလငျြ strategy ပွောငျးမညျပဟုစဉျးစားဆုံးဖွတျထား၏။
ဆေး absorption နှငျ့ action မရခငျ ၁၅၀ တခကျြကြျောသှား ၁၆၀ ရောကျပွီးနောကျ ဆေးအာနိသငျရသောအခါ ( မိနဈ၃၀ ခနျ့တှငျ) ၁၃၀ သို့ ကြ၏ ၊ ထို့နောကျ ၁၂၀ – ၁၁၀ ဆကျကြ၏။ အခွအေနေ ကောငျးမှနျလာကာ ဆဈဒနီလဆေိပျသို့ ရောကျသောအခါ ၁၀၂ ဖွဈ၏။ ( ဒီ knowledge ရစသေော မွငျဆရာမြား အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါသညျ ) ။
ကလေးမလေးလညျး ပွုံးနိုငျပွီး လကျဆှဲနှုတျဆကျ၏။ Thank you ဟုလညျး ကွိုးစား၍ ၂ခါပွော၏ ။
လဆေိပျရောကျသောအခါ ခရီးသညျမြား ဆငျးခှငျ့မရသေးဘဲ လဆေိပျမှ Quarantine Medical Team က တကျလာသညျ ။ Chief crew က မိတျဆကျပေးသညျ ။
သူတို့က လူနာအား ဖြားသေးလား အစရှိသညျဖွငျ့ Infection clues တှေ မေးသညျ၊ “It’s related to Asthma, Ventolin and heart issue. Not related to infection at all“လို့ ပွောပေးသညျ။ သူတို့ လူနာကိုပငျ မစမျးတော့ဘဲ Thank you ပွောကာ ပွနျသှားကွသညျ ။
မောနသေော ဆေးကြောငျးသူ လူနာမလေး စိတျသကျသာ ရာ ရသှားသညျ ။ သူမအား လကွေောငျးလိုငျး အစီအစဉျဖွငျ့ ဆေးရုံတှငျ ၂၄ နာရီထားရနျနှငျ့ Observation and further treatment အတှကျ လိုအပျသော information မြား ရေးပေးခဲ့ပါသညျ ။
Chief Crew မှ မိမိ၏ Visiting Card တောငျးသညျ ။ ကြေးဇူးမြားစှာ တငျကွောငျး ပွောကွသညျ။ Present နှငျ့ Krisflyer Prestige မြား ပေးသညျ ။
တိုကျဆိုငျသညျလား မသိ ။ ကြှနျတျောသညျ ညစဉျ အာစိဏ်ဏကံ မွောကျအောငျ လုပျလရှေိ့သော တရားမှတျခွငျး မတ်ေတာသုတျနှငျ့ ဗောဇ်ဈဉျ သုတျရှတျခွငျးတို့ကို Changi လဆေိပျ boarding မလုပျခငျ အခြိနျပိုတှငျ ရှတျခဲ့ပွီး လယောဉျစတကျခြိနျတှငျ ပဌာနျးနိဒ်ဒသေ ကိုလညျး ရှတျသညျ ။
ပွီးမှ အစာစားပွီး အိပျပြျောသှားသညျ ။ နိုးလာသျော လူနာကွညျ့ရသညျ။ အသကျတခြောငျး ကယျဖွဈသှားသညျဟု လညျး ပွော၍ရမညျ ထငျပါသညျ ။
လောကကွီးသညျ ကနြေပျဖှယျကောငျးပစှေ ။ လယောဉျဖွငျ့ ခရီးသှားစဉျ ကနျြးမာရေးအန်တရာယျကငျးရှငျးကွပါစေ
Previous: “အရပ်ပုပုကောင်မလေးတွေနဲ့ ချစ်သူဖြစ်မှသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ့် ထူးခြားတဲ့ခံစားချက် ( ၆ )မျိုး”
Next: ပေ ၁၀၀ အမြင့်တိုက်အမိုးပေါ်မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့ပြီး ခုန်ချပြကာစတန့်ပြခဲ့သူ(ရုပ်သံ)